Home Wararka Maraykanka iyo Kenya oo iska kaashanaya la dagaalanka argagaxisada Geeska Africa
Maraykanka iyo Kenya oo iska kaashanaya la dagaalanka argagaxisada Geeska Africa
Safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa feejignaan ka gashay suuragalnimada qaraxyo lala eegto, maanta waxa ay sameeyeen dhoolatus ciidan oo ay ka qaybgaleen Ciidamada Kenya u qaabilsan la dagaalanka waxa loogu yeero Argagixisada & kahortagga qaraxyada.
Saraakiil Mareykan ah ayaa sameeyay dhoolatus ciidan oo Askarta kenyaanka ah ay ku barayaan sida looga hortago Qaraxyada & ka warcelinta Weerarada sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Safaaradda Mareykanka Nairobi.
Wakiilo ka socda Xafiiska Amniga & Diblumaasiyadda ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya, ujeedka loogu martigeliyay ayaa ah in ay goobjoog ka noqdaan dhoolatuskaan ciidanka lagu fahamsiinayo sida looga hortago qaraxyada.
Saraakiisha Ciidanka gaarka u tababaran ee loosoo gaabiyo (GSU), Kooxda sida gaarka ah u qaabilsan qaraxyada, waaxda la dagaalanka “Argagixisada” & madaxda Amniga safaaradda Mareykanka ee Nairobi.
Kenya waxa ay feejignaan gelisay ciidamada ammaanka kaddib markii qarax uu ka dhacay Dalka Uganda, Xukuumadda Nairobi ayaa culeys saartay meelaha ay uga shakisan tahay in ay ka dhici karaan qaraxyada.
Safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa digniinteeda ku muujisay welwelka ay ka qabto Xaafadda Islii oo ay u badan tahay Soomaalida maadaama ay ka dhaceen kiisas kala duwan oo uu kamid yahay Afduub.
“Waxaa halkaan ku badan burcadda waxaana ka dhaca Afduub & dambiyo kale, sidaas awgeed waa in laga feejignaadaa ku socodka meelaha mugdiga ah oo ah goobaha dambiyada ka dhacaan” ayaa lagu yiri bayaanka Safaaradda.
“Booliiska Deegaanku waa diyaar laakiin inta badan ma laha awood ay wax uga qabtaan dambiyada dhacaya ee halis ah iyo weerarada Argagixisada, gargaarka degdega ah & Dab damisku waa kuwo xadidan” ayaa hadalka lasii raaciyay.
Mareykanka ayaa xoogga saaray dalka Kenya, Ciidamo xoojinaya kuwa KDF-ta ayuu geeyay deegaanno dhaca Xadka Soomaaliya, ujeedka waxa ay Washington ku sheegtay in Nairobi ay ka garabsiineyso la dagaalanka Al-Shabaab & kahortagga weerarada ka dhaca Dalkaas.